Indandatho yamapulangwe ingubuciko nobuciko obuhlukahlukene futhi obukhulu. Indawo ebushelelezi ngeke ingene ezandleni zakho, futhi ukubukeka kuhle.
Dala izindandatho ezenziwe zaba ngezakho: izindandatho ezingaphelile zokhuni, zingapendwa, zidaywe noma zihlotshiswe lapho kudingeka; Yenza izindandatho zakho ezenziwe ngamapulangwe ezenziwe ngezifiso.
Indandatho yezinkuni zemisebenzi eminingi: ifanele amaphrojekthi wezobuciko ahlukahlukene, njengokwenza ubucwebe be-DIY, umhlobiso we-Christmas wreath okhonjiwe, imihlobiso ependiwe, umhlobiso wohlaka lwesithombe oluncane, njll.
Izinto zemvelo, osayizi abahlukahlukene: Benziwe ngokhuni, indandatho yokhuni yemvelo, akukho pende. Ungakhetha amasayizi ahlukahlukene ukuhlangabezana nezidingo zakho zenqubo ezihlukile.
Ithoyizi lokuthambisa elihlanganiswe ne-silicone nokhuni kungokwemvelo, lilungele imvelo futhi liphephile. Izinkuni zinezici zemvelo nezici ezisiza ukugcina imvelo yamazinyo nomgodi womlomo. Ingane ingakwazi ukuhlanganisa izandla namehlo ngenkathi inciphisa ukungakhululeki kwamazinyo.
Uyemukelwa ngokwezifiso ilogo eringini lokhuni, okusiza ukusungula umkhiqizo wakho.
I-Wooden Ring Silicone Teething Teether yengane ...
I-Wood Ring Baby Teething Natural Chewable Factor ...
teething yemvelo, abicah teething ubuhlalu , ukudla grade abicah ubuhlalu ngobuningi, abicah teether , teether kangcono ngenyanga 4 ubudala , abicah ingane teether ,